Ma ogtahay wax kharibaadyo ah oo leh cinwaanka astaanta SEO ee darajooyinka iyo taraafikada kordhaya?
Maalmahan, mawduuca cinwaanka SEO weli waa qayb muhiim ah oo ka mid ah fikradda casriga ah ee Search Engine Optimization. Si kastaba ha ahaatee, ugu dambeyntii waxaan ogaaday in tiro daraasado ah oo daraasaddan la xidhiidha ay si yar u yaraayeen. Xitaa inkastoo inkastoo dad badan oo qaata badan oo tijaabo ah oo leh astaanta cinwaanka SEO ayaa si guul leh u cadeeyay in mawduucyada isbeddelka ah ay bixiyeen horumarka dhabta ah ee la cabbiri karo ee boggooda bogga SERPs.
Oo halkan waxaan ku imanaynaa dhibic, waliba marar badan ayaa la ilaaway saamiyada libaax ee milkiilayaasha ganacsiga ee internetka, iyo sidoo kale webmasiga casriga ah. Xaqiiqda, cinwaanka astaanta SEO (haddii loo baahdo) waxay si toos ah u keeni kartaa bogga intarnetka oo saameyn weyn ku leh CTRs (qiimaha guji-dhaafka ah), iyada oo markaa siinaysa dhiirigelinta socodka guud ee socodka gaadiidka. Dabcan, wax kasta oo lagu gaadhi karo gaadiidka gaadiidka ee CTR waxay ka dhalin karaan koror dhabta ah ee liiska boggaaga kaliya xaaladaha qaarkood - parchi divertimento marche abruzzo.
Marka, sidee loo helaa lacag labanlaab ah? Aan u dallacno mawduuca cinwaanka 'SEO'. Waxaad xor u tahay inaad isku daydo Hacks-ka, iyo dabcan, dhammaantood ma shaqeyn doonaan website-kaaga si hubaal ah. Kaliya iskuday mid ka mid ah kuwan oo hel fikrada ah halka laga bilaabo tijaabooyinka ku xiga ee leh cinwaanka "SEO". Mararka qaarkood, xaaladaha qaarkood, websiyo badan ayaa arki kara qiimo aad u sarreeya marka la tiriyo oo ay ku jiraan nambarada cinwaanka cinwaanka. Trick waa lambarradaas waxay u badan tahay inay ka dhigaan boggaaga bogga inuu ka soo baxo tartanka natiijooyinka raadinta. Si fudud sababtoo ah tirooyinka ugu dambeyntii waxay yihiin waxyaabo gaar ah oo badanaa lagu xiro indhaha dadku dhexdooda ka mid ah tiro badan oo ah warar kala duwan. Haddii aad isticmaalayso WordPress, halkan waa hackka soo socda ee cinwaanka cinwaanka SEO si aad si fiican ugu shaqeyso boggaaga internetka. Waxaan kugula talineynaa inaad ka faa'iideysato isticmaalka Yoast plugin WordPress si aad u cusbooneysiiso astaanta cinwaanka taariikhda ku habboon. Waxayna u shaqeyneysaa si fudud oo ah inaad adigu adigoo u adeegsanaya cinwaankaaga cinwaankaaga bil walba illaa bil ama sanaba-sannadka si isku mid ah. Mar labaad - marakan "hack" ma aha mid sax u ah kiisaska oo dhan, laakiin qaar ka mid ah weydiimaha qaarkood, waxay cadeeyeen in ay si fiican u qabtaan.
. Laakiin hadday noqoto in la gaabiyo waxaa laga yaabaa inuu keeno kor u kac degdeg ah oo qiimeyn ah? Haddii qoraalkaaga magaciisu aad u dheer yahay, way adkaan kartaa in aan si dhab ah u fahanno waxa ay tahay. Habkaas, waxaad u badan tahay inaad isku daydo inaad mar kale akhriso. Sidaa samee farsamooyinka raadinta! Taasina waa sababta aad saxeexaada ku guulaysatay waa inay lahaataa dherer dherer ahaan u dhexeysa 50-60 jilayaal, hodan ku leh ereyada ugu muhiimsan ee loo adeegsado raadiyeyaasha dhabta ah.
Iyadoo la tixgelinayo in ereyo iyo weedho wax-ka-qabasho oo badanaa laga helo baaritaanka ereyga ee muhiimka ah, waa fikrad wanaagsan oo aad ku isticmaasho iyo caawinta dadka guji. Waxaan ula jeedaa isticmaalka ficilada ugu dhaqsiyaha badan (sida tagista, helitaanka, soo dejinta, daawashada, barashada, iwm. ), sababtoo ah waxay u badan tahay inay keenaan wax aad u xiiso badan, oo ka baxsan erayga muhiimka ah ee la raadiyay. Habkaas, siinta martidaada sida "wax yar oo dheeraad ah" waxay si weyn u kordhin kartaa qiimaha riixitaanka.